INASA ithola amaplanethi ayisikhombisa angagcina impilo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
INASA ithola amaplanethi ayisikhombisa angagcina impilo
Kwenzekile: ubuntu, noma ikakhulukazi, I-NASA ayitholanga amaplanethi anamadwala angaphezu kwamane kufana noMhlaba, okungasho ukuthi ezinye zazo zingaba namanzi angamanzi futhi, kwazi bani, mhlawumbe nokuphila.
Ukutholwa, ngaphandle kokungabaza, kungenye ebaluleke kakhulu emlandweni wethu wakamuva, ngoba manje kunanini ngaphambili singasondela ekwazini ukuthi sisodwa e-Universe noma uma sihlanganyela nabanye abantu ngempela.
Esinye sezibonakude zeNASA sithole uhlelo lwonozungezilanga olunamaplanethi ayisikhombisa anamadwala ngoLwesithathu, ngoFebhuwari 22, 2017. Inkanyezi lapho izungeza khona "ibhajadiswe" i-TRAPPIST-1, namaplanethi njengo-b, c, d, e, f, g, h. Lezi zimbulunga ezinamadwala, yize zingakwazanga ukuzibona ngqo, Ososayensi banciphise ukuba khona kwayo, ubukhulu bayo nobukhulu bayo, ngokuthi ukukhanya kwenkanyezi kuncipha kanjani isikhathi ngasinye lapho enye yezinkanyezi ingena phakathi kwayo noMhlaba..
Kwabathathu babo - e, f, g- kungaba nokuphila okutholakala endaweni okungahlala kuyo inkanyeziNgamanye amagama, lapho izinga lokushisa lanele khona ukuthi kube namanzi ketshezi. Amaplanethi b, c, no-d asondele kakhulu enkanyezini, ngakho-ke kungenzeka ukuthi ayashisa kakhulu, kanti iplanethi h, okude kakhulu, kungenzeka ukuthi ibanda kakhulu. Noma kunjalo, ososayensi abakukhiphi okunye: UMichaël Gillon weNASA uthe lokho »kungaba namanzi kunoma iyiphi yazo".
Le Solar System emangalisayo itholakala eminyakeni eyizigidi ezingama-40 yokukhanya ukusuka eMhlabeni, kuyi-constellation i-Aquarius, futhi iplanethi f ikhandidethi engcono kakhulu yokubamba impilo. Ifana kakhulu nosayizi weplanethi yethu futhi kuthatha izinsuku eziyisishiyagalolunye ukuzungeza inkanyezi yayo. Ngakho-ke umcabango awenzanga lutho ngaphandle kwesibhakabhaka. Kungaba njani ukuhlala lapho?
U-Amaury Triaud, umbhali ngokubambisana wocwaningo, waseCambridge Institute of Astronomy (UK) uthe "ukuba lapho emini bekungafana nalapha ekushoneni kwelanga. Kungaba kuhle ngoba njalo kaningi enye iplanethi ibizodlula esibhakabhakeni ebizobukeka iphindwe kabili kunenyanga». Yize kunjalo, unyaka wasemhlabeni ungathatha izinsuku eziyisishiyagalolunye, futhi yisistimu elanga esingayichaza ngokuthi "iphakethe".
Inkanyezi iTrappist-1 iyisigaxa se-ultracold esinobubanzi obulingana no-12% weLanga nobushushu bomhlaba obucishe bube ngu-2300 ,C, uma kuqhathaniswa no-5500ºC wenkosi yethu yenkanyezi. Ngokwalesi sizathu, izinga lokushisa lomhlaba leplanethi f cishe lingaphansi kwamadigri amaningana kunalapha (14-15 ° C).
Naphezu kwakho konke, ukuphela kwento enesisindo esanele ukugcina umoya, okuyinto ebalulekile ekuphileni.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » INASA ithola amaplanethi ayisikhombisa angagcina impilo
Ugwadule lwe-Atacama, indawo eyoma kakhulu emhlabeni
Ingxenye eseningizimu yeChile ibalulekile ukuqonda ukuguquka kwesimo sezulu